Exclusive North East Holiday Package | Dana + 91-993.702.7574 Kutarisa.
Iko North East Region yeNdiya haisi pasi peparadhiso pasi pano uye ndicho chikonzero vatashanyi vari kumativi ose enyika vakwezva kunharaunda iyi nguva zhinji. Our Exclusive North East Holiday Package inoita kuti tive nehutano hwekufambisa kune vanofamba. Kubatana kweHNUMX states, iyo inonziwo 'Vanin'ina Vanomwe', North East India inoratidzira zvakanyanya kune marudzi ose evatambi. Iine chairo chayo iyo ichakutsvaira kubva patsoka dzako! Nzvimbo yekunaka kwakasimba, iyo nyika inoshamisa iyo nzizi dzemvura dzinoyerera kuburikidza nekuputika makomo eAmaalaya, kutenda kunokonzera makomo pamusoro pekufambira kunotyisa kusvika kuTawang, rhinos inotanga mumasango ane mvura yakaoma eKazranga uye avo vangave vatsva-vakuru vanotambira zvishoma nezvishoma nhasi Nagaland. The Exclusive North East Holiday Package ichakubvumira kuwana ruzivo rwusina kumbove narwo. Nenyika uye nzvimbo, North East India yakasiyana nedzimwe nyika uye zvakafanana zvinoonekwa mumararamiro enyika. Kushamwaridzana kweBlue Mountains, miti inofadza zvikuru, masango akaoma, masango emhuka yemhuka, mararamiro ehupenyu uye zvigadzirwa zvemhizha zvinokusiya iwe nezviyeuchidzo zvisingakanganwiki, uye Exclusive North East Holiday Package inovimbisa izvozvo. Nzvimbo dzekumaodzanyemba dzakadziva kumadokero dzinozivikanirwa nekunaka kwepanyika, uye kumarudzi emadzinza, mamiriro okunze, nzvimbo nemarudzi & Exclusive North East Holiday Package ndiyo nzvimbo chete iwe iwe unogona kukuratidza iwe Chaizvo chakumadokero.
09 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 027
ZUVA 01: NJP RAILWAY STATION / BAGDOGRA AIRPORT - GANGTOK
Paunosvika kuBagdogra Airport, (500Ft / 150Mts) ichagamuchirwa neHurumende yeHurumende iyo ichakubatsira kukwira motokari yako ku Gangtok (5500 Ft / 1677 Mts, 130 Kms / 04 kusvika 05 Hrs). Tarisa-mukati uye usiku humwe pahotera.
Mushure memangwanani, mangwanani, kutanga kutamira kuTshangu Lake - iri panzvimbo yakakwirira ye12400Ft / 3780 Mts / 43Kms mu3Hrs nenzira imwe, nehupamhi hwepakati hwe 50 ft. Mvura inotonhorera yeLake yakanyatsorongeka neyakanaka runako rwakapoteredza. Dzokera kuG Gangtok uye Usiku husiku pahotera. (Kana pakaitika slide kana chimwe chikonzero kana Tshangu Lake yakavharwa tichapa mamwe maonero ekuona).
Mangwanani anoenda kwehafu yezuva kuona nzvimbo yakatarisa Jhakri Water Falls (04 hrs) pamwe chete naDroul Chorthen, Research Institute yeTibetology, Directorate of Handicraft & Handloom (Yakavharwa neSvondo), Flower Show. Manheru kumashure kuDarjeeling (7380 Ft / 2250 Mts, 115 Kms / 05 kusvika 06 Hrs). Usiku huno pahotera.
ZUVA 05: DARJEELING - BAGDOGRA AIRPORT - GUWAHATI NAAIR - KAZIRANGA
Mushure mekudya kwekudya kwekudya mangwanani (IXB) Bagdogra Airport (100 Kms / 03 kusvika 04 Hrs) yeGuwahati. Paanosvika kuGuwahati ndege inoenda kuKaziranga. Usiku huno pahotera.
ZUVA 06: KAZIRANGA
Mangwanani-ngwanani kutasva nhangai (inotanga kubva paawa 0500) kweawa. Pashure pekudya kwemanheru jeep safari. Usiku huno pahotera.
ZUVA 07: KAZIRANGA - SHILLONG
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kuShillong. Tarisa-ku hotera uye wozorora wakasununguka. Usiku huno pahotera.
ZUVA 08: SHILLONG
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaKerrapunji Usiku huno pahotera.
ZUVA 09: SHILLONG - GUWAHATI
Mushure mekudya kwekudya kwekudya ku Guwahati. Tarisa-ku hotera uye gare gare mukushanya kweKamakhya Devi Temple uye Sankardev Kalakshetra. Usiku huno pahotera.
ZUVA 10: GUWAHATI AIRPORT DROP
Mushure mekudya kwekudya kwekudya, kuenda kune Guwahati Airport kune imwe mberi rwendo.